Isle Of Jura Kutenda Mashura Tattoo Edition 0.7l - Wevino.store
Isle Of Jura Kutenda Mashura Tattoo Edition 0.7l
ISLE YAJURA SUPERSTgment TATTOO DZidziso
Iyo imwe malt "Isle Of Jura Superstition" inoshambadzirwa kumadokero kwemahombekombe eScotland uye inopenya kubvira 2017 mune yakakosha tattoo dhizaini.
Ivo vanofunga whiskey vanowanzobatanidza inoyevedza mifananidzo yeScotland - zvitsuwa, makomo, makomo nemadziva sekunge uri mune imwe nyika. Zvakanakisa ndezvekuti "Isle Of Jura Superstition Tattoo Edition" inoshandura cliché ive yechokwadi. Ichi chitsuwa Jura chakavanzika uye chinoratidza pacharo pachena pachena. Izvo zvinodei kudarika mugwagwa, iyo pub uye distillery? Jura inzvimbo inoshamisa yekugadzira yakanaka yeScotland whiskey.
Kunze kwe "Imwe Uye Zvese" Isle yeJura zvakare inovimbawo pane yakasarudzika yeiyo Superstition whiskey. Iyo tattoo tattoo yeiyo Isle Of Jura Superstition ine 0.7L, inozviratidza mumhando inoshamisa uye musanganiswa wevanoputa uye vasina-vaputi Jura whiskeys. Naizvozvo, iyo Malt yega yega ndiyo sumo yakakodzera kune vese avo vasati vajairana nenyika yekusvuta whiskeys. Utsi hwe peat hauna kunyanyisa kuwandisa uye hunobatwa neanotapira ehuchi uye chokoreti. Cinnamon uye ginger zviri kupa iyo Scotch kunyanya inonhuwirira tsamba.
Ndiani anonyatsotarisa, anoona iwo mahombe epamusoro e "Isle Of Jura Superstition Tattoo Edition" zvakananga pahombodo: Mazita akakodzera uye mifananidzo yakakodzera inobatanidzwa pamwe nekutamba kunonakidza. Malt imwe chete kubva kuchitsuwa cheJura haingori chete inonakidza inoratidzwa neakawanda maficha, asiwo kuwanda chaiko.